Wasiirka Gaadiidka KG oo dib ugu soo laabtey Magaalada Baydhabo. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wasiirka Gaadiidka KG oo dib ugu soo laabtey Magaalada Baydhabo.
Wasiirka Gaadiidka KG oo dib ugu soo laabtey Magaalada Baydhabo.
written by Siid Cali 17/07/2021
Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka koonfur galbeed Mudane Xasan Xuseen Maxamed ‘Eelay’ ayaa dib ugu soo laabtey Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka baay kadib markii uu asiga iyo wefdi uu hogaaminaayey safar shaqo ah ay ku jogeen Degmada Xudur.
Wasiirka oo maalmo uu joogey Degmada ayaa waxaa uu dhahax dhigey markii ugu horesey taraminaal caalami ah ay yeelato Degmada Xudur oo wax maanta baaho weyn ay u qabeen shacabka ku nool halkaasi.Maamulada gobolka bakool’ kan Degmada Xudur iyo shacabkooda ayaa si aad ah u soo dhaweyeen iyagoona tani ay ku shegeen in ay tahay wax lagu farxo.
Si uu u ogaado baahiyaha kale ee ka jira Gobolka bakool gaar ahaan Degmada Xudur wasiirka ayaa Wuxuu kulamo layeeshey maamulka, odiyaasha dhaqanka iyo bulshada kale, waxeyna kulanka wasiirka ugu shegeen dhismaha garoonka iyo howlaha kale ee wasaaradda ay quseyso dhageysi kadib wasiirka Xasan ayaa wuxuu balan qaadey in ka wasaarad ahaan wax badan uu ka qaban doono Degmada Xudur midaanina ay tahay bilowga ugu horeeyo ee wax ka qabashada Degmada.
Maamulka iyo shacabka oo ku faraxsan bilowgaani wanaagsan ee wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada kg Xasan Xuseen Maxamed ‘Eelay’ uu ka qabtey Degmada Xudur oona ku raja weyn yihiin in uu dhameystiri doono howlaha kale ayaa si wanaagsan ugu soo sagootiyeen garoonka diyaaradaha Degmada Xudur.
Mudooyinkaani ayaa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada koonfur galbeed waxey wadey dadaalo lagu horumarinaayo garoomada iyo howlaha kale iyadoona hadda ay ku guleysatey in garoomo qaar ee ku yalaan Degmooyinka koonfur galbeed in dhismooyin cusub iyo dayactir ay ku samesey taasi oo ah waxyaabaha loo igmaday wasaaradda iney wax ka qabato.
BY: Siid Cali Muuse Ateera.
Wasiirka Gaadiidka KG oo dib ugu soo laabtey Magaalada Baydhabo. was last modified: July 17th, 2021 by Siid Cali
Madaxweynaha Koofurgalbeed oo xariga ka jaray xabsiga Dhexe ee Baydhabo
IGAD oo rajo wanaagsan ka muujisay Wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland